MBOLA RAJAONAH : Nohadihadiana teny amin’ny sampan-draharaha miady amin’ny Kolikoly
Tamin’ny alarobira 13 janoary 2019 lasa teo raha tsiahivina no voasambotra tetsy Antsahabe ilay mpandraharaha ikoizana amin’ny resaka kolikoly avo lenta, dia i Mbola Rajaonah. 14 février 2019
Taorian’io fisamborana azy io dia nalefa teny amin’ny sampan-draharaha misahana ny ady heloka bevava (BC), tetsy Anosy avy hatrany ity farany, nalaina am-bavany sy natao famotorana. Araka ny tatitra voaray hatrany dia nentina tao amin’ny sampan-draharaha miady amin’ny kolikoly na ny PAC (Pôles Anti-Corruption) tetsy amin’ny 67ha izy, omaly tolakandro ary mbola andrasana aloha hatreto ny tohin’ny famotorana natao taminy tao amin’ity sampan-draharaha ity.
Vesatra maromaro moa no iampangana azy ity ka isan’ireo ny fanaovana hosoka tao amin’ny ladoany izay efa notanterina teto ihany. Ankoatra izany dia isan’ireo mpiray tendro tamin’ny fampidirana ilay sambo “Flying” nikasa hanondrana andramena an-tsokosoko tany amin’iny Faritra Sava iny ihany koa Ingahy Mbola Rajaonah ary inoana fa tsy ho afa-bela amin’ireo vesatra maro iampangana azy ireo izy.